Obits Coin စျေး - အွန်လိုင်း OBITS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Obits Coin (OBITS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Obits Coin (OBITS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Obits Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $377 562.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Obits Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Obits Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Obits CoinOBITS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00959Obits CoinOBITS သို့ ယူရိုEUR€0.0081Obits CoinOBITS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0073Obits CoinOBITS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00874Obits CoinOBITS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0862Obits CoinOBITS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0603Obits CoinOBITS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.212Obits CoinOBITS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0357Obits CoinOBITS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0128Obits CoinOBITS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0133Obits CoinOBITS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.215Obits CoinOBITS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0743Obits CoinOBITS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0514Obits CoinOBITS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.719Obits CoinOBITS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.62Obits CoinOBITS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0131Obits CoinOBITS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0144Obits CoinOBITS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.299Obits CoinOBITS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0667Obits CoinOBITS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.01Obits CoinOBITS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩11.38Obits CoinOBITS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.73Obits CoinOBITS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.704Obits CoinOBITS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.266
Obits CoinOBITS သို့ BitcoinBTC0.0000008 Obits CoinOBITS သို့ EthereumETH0.00002 Obits CoinOBITS သို့ LitecoinLTC0.000159 Obits CoinOBITS သို့ DigitalCashDASH0.00009 Obits CoinOBITS သို့ MoneroXMR0.000102 Obits CoinOBITS သို့ NxtNXT0.686 Obits CoinOBITS သို့ Ethereum ClassicETC0.00133 Obits CoinOBITS သို့ DogecoinDOGE2.7 Obits CoinOBITS သို့ ZCashZEC0.0001 Obits CoinOBITS သို့ BitsharesBTS0.365 Obits CoinOBITS သို့ DigiByteDGB0.352 Obits CoinOBITS သို့ RippleXRP0.031 Obits CoinOBITS သို့ BitcoinDarkBTCD0.000323 Obits CoinOBITS သို့ PeerCoinPPC0.0345 Obits CoinOBITS သို့ CraigsCoinCRAIG4.26 Obits CoinOBITS သို့ BitstakeXBS0.399 Obits CoinOBITS သို့ PayCoinXPY0.163 Obits CoinOBITS သို့ ProsperCoinPRC1.17 Obits CoinOBITS သို့ YbCoinYBC0.000005 Obits CoinOBITS သို့ DarkKushDANK3 Obits CoinOBITS သို့ GiveCoinGIVE20.25 Obits CoinOBITS သို့ KoboCoinKOBO2.08 Obits CoinOBITS သို့ DarkTokenDT0.00884 Obits CoinOBITS သို့ CETUS CoinCETI27